Kabtanka xulka Puntland oo ka hadlay dacaayad been abuur ah oo laga qoray. – Radio Daljir
Kabtanka xulka Puntland oo ka hadlay dacaayad been abuur ah oo laga qoray.
Luulyo 25, 2016 9:17 b 0
Kabtanka kooxda Puntland Cabdisalaan Jaamac Faarax oo galabta lahadlayey Idaacadda Daljir ayaa kahadlay ciyaarta finalka iyo arrimo la xiriira dacwado laga gudbiyey.
Dhiidhiinyo ayaa ugu horeyn guul ka saadaaliyey ciyaarta ay beri la ciyaarayaan xulka Jubbaland ee finalka tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.
Kabtanka xulka Puntland oo kahadlay arrimo la xiriirey dacwado lasheegay in laga gudbiyey oo la xiriirey inuu saftay ciyaaro caalami ah ayaa sheegay in warkaasi yahay wax kama jiraan, ayna qoreen warbaahin diidan horumarka Puntland.
Ugu dambayntiina Kabtanka ayaa u sheegay shacabka Puntland in maalinimada berito ah uu ciyaari doono ciyaarta kama dambaysta ah ee ay kahor imaanayaan Jubbaland.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo lagu caanashubay iyo madaxweynaha oo u hambalyeeyey.